Testing Comments (Paginated) – Xogsoor News Network
R/wasaare Kheyre oo xarigga ka jaray Garoon diyaaradeed oo ay yeelan doonto Magaalada.
Golaha Aqalka Sare Oo Ansixiyay Hindise-Sharciyeed Muhiim Ah.
Maareeye oo Shaaca ka qaadey sababta loo geeyay Ciidamada Somaliya gobolka.
Xildhibaan mahad salaad Sharciga batroolka sooma marin habraaca sharci dajinta.
Siyaasi Cabdiraxmaan CabdiShakuur Iyo James Swan Oo Ka Wada Hadlay.
Dal daris la ah Somaliya oo beenisay in dalkeeda laga helay qof qaba Coronavirus